ပြည်ပစုံစမ်းရေးအဖွဲ့ဝင် ပါဝင်ရေး အစိုးရပယ်ချ
၂၀၁၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက်နေ့က အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဘာလီကျွန်း အာဆီယံ ထိပ်သီးညီလာခံသို့ တက်ရောက် ခဲ့သော နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်ကို တွေ့ရစဉ်
မောင်တောမြို့နယ် ဒုချီးရားတန်း အရေးအခင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတကာ စုံစမ်းရေးအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး ပါဝင်စုံစမ်းစစ်ဆေးခွင့်ပေးဖို့ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး က တောင်းဆိုခဲ့တာကို မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ပယ်ချခဲ့တယ်လို့ သြစတြေးလျအခြေစိုက် ABC သတင်းဌာနက ဒီကနေ့ သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ရန်ကုန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှာ မနေ့က ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ သံတမန်တွေကို ရှင်းလင်းပွဲမှာ အခုလို ငြင်းဆိုခဲ့တာလို့ သိရပါတယ်။ သတင်းမီဒီယာတွေကို ၀င်ရောက်သတင်းရယူခွင့် ကန့်သတ်ခဲ့တဲ့အတွက် ဒီကနေ့ကျမှ သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒုချီးရားတန်းရွာမှာ ရွာသားတွေ အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ခံရတယ်လို့ နိုင်ငံတကာ သတင်းမီဒီယာတွေ နဲ့ လူ့အခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေက စွပ်စွဲဝေဖန် ပြောဆိုနေ တာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာအစိုးရ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနက သံတမန်တွေကို မနေ့က ရှင်းလင်းရာမှာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး Derek Mitchell က နိုင်ငံတကာ စုံစမ်းရေးမှူးတစ်ဦး ထည့်သွင်းစုံစမ်းပေးဖို့ အကြံပြုတင်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် စုံစမ်းစစ်ဆေးရာမှာ နိုင်ငံတကာက ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး ထည့်ပေးဖို့၊ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းက ယုံကြည်လက်ခံနိုင်မယ့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးတစ်ဦးကို ထည့်သွင်းပေးဖို့ တောင်းဆိုလိုကြောင်း၊ ဒါဆိုရင် ရခိုင်ပြည်နယ်က ပြည်သူတွေနဲ့ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းအတွက်ပါ ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဟာ ပြည်သူ လူထုက သက်သက်စုံစမ်းတာမျိုး၊ ဒါမှမဟုတ် မြန်မာအစိုးရချည်းသက်သက် စုံစမ်းတာမျိုး မဟုတ်တော့ ဘဲ နိုင်ငံတကာအသိုင်းဝိုင်းက စိတ်ချယုံကြည်မှာဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန်သံအမတ်ကြီးက ပြောပါတယ်။
ဒီလိုတောင်းဆိုရာမှာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်က ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဟာ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ ပြည်တွင်းရေးသာဖြစ်ကြောင်း၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရှိ ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်ပ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးကို ထည့်သွင်းနိုင်မှာ မဟုတ်ကြောင်း ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်ပြောတော့ပယ်ချတယ် တရုတ်ပြောတော့နိုင်ငံသားကဒ်ပြားတင်မက ၀ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီပါထောင်ခွင့်ပေးထားတယ် တရုတ်လွမ်းမိုးမှူအလိုမရှိ
Feb 01, 2014 04:57 PM
ကျုပ်အိမ်မှာ ကျုပ်မူးရင် ဆူမယ် ၊ မိန်းမကို ရိုက်မယ် ၊ ခလေးတွေကို အော်မယ် ၊ အငတ်ထားမယ် ၊ ခွေးကို ကန်မယ် ၊ ကြောင်ကို ရေနွေးပူနဲ့ ပက်မယ် ..။ အဲဒါ ဘာဖြစ်လဲ။ ဒါ ကျုပ်ရဲ့ အိမ်တွင်းရေးဗျ။
ခင်ဗျားတို့က မမြင်ချင်ရင် မျက်စိမှိတ်ထား ၊ မကြားချင်ရင် နားပိတ်ထား ။
Jan 31, 2014 08:17 PM
Bravo! U Wunna Maung Lwin! Our Myanmar is the Independent Sovereignty Country. No one allow to interfere our internal affairs. UK & US are going to exercise Neocolonialism. If they give too much pressure on Myanmar, we should review our foreign policy.
Jan 31, 2014 08:30 AM
May God Judge the Crimes Against Humanity.
Jan 29, 2014 08:19 PM
Human rights can’t stop Rohingya terrorists.
Jan 30, 2014 08:45 PM